आक्रामक आईजी, <br> पहिलो आदेश– चेन अफ कमान्ड !
HomeAparadh Khabarआक्रामक आईजी,
पहिलो आदेश– चेन अफ कमान्ड !
aparadhkhabar.com 6:27 AM
काठमाडौं । गत साता सरकारले नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बलमा नयाँ आईजीपी बढुवा नियुक्ति गरेको छ ।
आईजीद्वय खनालले चेनअफ कमाण्ड भन्दा बाहिर जाने र आपराधिक गिरोहसँग साँठगाँठ गर्नेलाई संगठनमा ठाँउ नहुने भन्दै चेतावनी दिएका थिए । सिपाही हबल्दारको पिडाको बिषयमा दुवै संगठन प्रमुखले आफ्नो ध्यानआकर्षण गराएका थिए । प्रहरीका आईजी खनालले सिपाही हवल्दारलाई कारवाही गरेर उम्कने दिन गएको भन्दै हाकिमलाई सचेत हुन सुझाएका छन ।
खनालद्वयको नियुक्तिसँगै दुवै संगठनका मै हुँ भन्ने हाकिमका निद हराम भएको छ । संगठनको प्रमुखको रूपमा व्यावसायीक छवि भएका प्रमुख पाएपछि सिपाही हवल्दार देखि जेहन्दार प्रहरी अधिकृत भने खुशी छन् । कर्मचारीको वृत्ति बिकासमा अब ठेस नपुग्ने अनुमान उनीहरूले गरेका छन् । चाकडी चाप्लुसी गर्ने तथा आर्थिक र राजनीतिक दबाब दिएर बढुवा र राम्रा पोस्टिङ खाँदै आएका प्रहरी अधिकृतका समेत निद हराम भएको चर्चा दुवै प्रहरी संगठन भित्र चल्न थालेको छ ।